कसरी इमेल द्वारा ठूला फाइलहरू पठाउन - व्यावहारिक सुझावहरू
कागज मा अक्षर र गत्ता बक्से मा पठाउन फैशन छैनन् जहाँ आजको इलेक्ट्रोनिक विश्व, मा, प्रश्न कसरी इमेल द्वारा ठूला फाइलहरू पठाउन को रहनेछ। पनि कम्प्युटर प्रविधिको धेरै छिटो प्रगति यद्यपि, ठूलो रकम को प्रसारण कहिलेकाहीं गाह्रो छ। गरौं ई-मेल डाटा मद्दत धेरै छिटो हस्तान्तरण गरिएको छ संग तथापि, केही बेफाइदा छ।
प्रसारित सामाग्री को राशि मा आधुनिक सीमा एक डाटा को 25 एमबी भन्दा बढी फाइल पठाउन अनुमति छैन। त्यसैले तपाईं एक ई-मेल ठूलो फाइलहरू पठाउन अघि, तपाईंले यो प्रक्रिया सरल मदत गर्न सक्छ केही nuances जाँच गर्नुहोस्।
पहिलो तरिका: तपाईं भागहरु मा फाइलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यो अन्त गर्न, सान्दर्भिक डाटा संग्रह मा राखिएको हुनुपर्छ। तर, यो विधि निकै लामो लाग्न सक्छ। फिर्ता गर्न, तपाईं कुनै पनि मानक सफ्टवेयर (winrar, WinZip) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। , आकार टुक्रा आफ्नो संरक्षण ठाँउ: फाइल को प्रक्रिया मा तपाईंले केही सेटिङहरू निर्दिष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ साझा।
तपाईं मेल ठूलो फाइलहरू पठाउन अघि, तपाईं कसरी टुक्रा मा फाइल विभाजित गर्न जान्नु आवश्यक छ। के सबै भन्दा राम्रो कुरा कुल कमाण्डर कार्यक्रम छ। त्यसपछि, अन्य कम्प्युटर पठाइएको डाटा फेरि एक फाइल मा भेला हुन्छन्। सुरु गर्न, भाँचिएको संग्रह भण्डारण गर्न जो एउटा फोल्डरमा चयन गर्नुहोस्। अब शीर्ष प्यानल शब्द "फाइल" को लागि "विभाजन फाइलहरू ..." देख रहे र त्यसपछि। यो आदेश क्लिक, तपाईं सञ्झ्यालमा हेर्न संग्रह अलग प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
तपाईं ठूलो फाइलहरू, र अन्य साधन पठाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्न, डाटा कुनै पनि सेवा वा फाइल साझेदारी गर्न अपलोड गर्नुपर्छ, र तिनीहरूलाई एउटा लिङ्क प्राप्त गर्नुहोस्। पहिलो हामी एक जानकारी भर्न र यसलाई पहुँच सक्छ जहाँ एक साइट फेला पार्न आवश्यक छ। र यस्तो सेवा मा डाउनलोड डाटा भुक्तानी आवश्यक छ। को एक्सचेंजर मा नै समयमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड पछि, तपाईंले आफ्नो फाइल एउटा लिङ्क प्राप्त हुनेछ, र तपाईं मेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ।
तथापि, दोस्रो प्रसारण विधि पनि यसको बेफाइदा छ। उदाहरणका लागि, filehosting केही समय प्रतीक्षा र फाइल डाउनलोड गर्न एक क्याप्चा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी किनभने यी साइटहरूमा सधैं एक ठूलो रकम र यति कष्टप्रद विज्ञापन पाउन सक्नुहुन्छ, र यो सभ्य सामग्री सधैं छैन।
पहिले एक ठूलो फाइल स्थानान्तरण गर्न कसरी आकार, यसलाई कुन डाटा भण्डारण गर्न अन्य सेवाहरू बारे पत्ता लगाउन उचित छ। यो "बादल भण्डारण" तथाकथित। सबैभन्दा लोकप्रिय र सामान्यतः प्रयोग सेवा गुगल ड्राइभ छ। तिनीहरूले नै सिद्धान्त, साथै फाइल साझेदारी मा काम, तर तिनीहरूले थप प्रयोग गर्न सहज छन्, र तिनीहरूले धेरै nicer इन्टरफेस छ। विशेष गरी यहाँ किनभने त्यहाँ कुनै विज्ञापन हो। यो प्रणाली मात्र drawback यसलाई दर्ता गर्न आवश्यक छ भन्ने छ।
अब तपाईं कसरी इमेल द्वारा ठूला फाइलहरू पठाउन थाहा छ। वर्तमान विधिहरू धेरै, सरल बुझ्ने र प्रयोगकर्ता-अनुकूल छन्। त्यसैले अब तपाईं कठिनाई बिना घर छोडेर बिना, डाटा को कुनै पनि रकम पठाउन सक्नुहुन्छ। शुभकामना छ!
कसरी आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न
निर्देशन: विक्रेता कसरी लेख्न गर्न "Aliekspress"
पेट गुहावट को महामारी को एरिरेजम: कारणहरु, लक्षणहरु र उपचार
कसरी एक मानिस subdue गर्न
के रूसी राम्रो, जर्मन मृत्यु: जहाँ अभिव्यक्ति?
Enema: प्रदर्शन प्रविधी, सही विवरण